Boorashka Boorashka Magaalada ee Collinsville, Illinois
Afrika & Bariga Dhexe
Bartamaha & Koonfurta Ameerika
Teknoloji & Gear
Xadiiqadda Biyaha ee Biyaha ee Magaalada Collinsville, Illinois
Markaad diyaar u tahay qaar ka mid ah madadaalada qorraxda, laakiin aad rabto in ka badan barkadda xaafadda, madax ka ah Splash City Waterpark ee Collinsville, Illinois . Soo jiidashada caanku waxay leedahay barkado kala duwan, xargo iyo sifooyin biyo ah si qof walbaa oo qoyska ah loogu ilaaliyo saacado.
Xagaaga xagaaga oo dheeraad ah oo xiiso leh, booqo barkadaha dabbaasha dadweynaha iyo goobaha biyaha ee St. Louis ama booqo St. Louis Zoo .
Saacadaha iyo Goobta
Splash City ayaa sanad walba furan maalinta Isniinta ee Sabtida ah iyo xidhitaanka Maalinta Shaqaalaha. Sanadka 2018, Splash City waxay furan tahay maalin kasta laga bilaabo May 28 ilaa Agoosto 11, iyo dhammaadka usbuucyada kaliya laga bilaabo Agoosto 19 ilaa Sibtambar 3. Goobta biyaha ayaa furan maalin kasta laga bilaabo 11 subaxnimo illaa 7 galabnimo, saacado dheeraad ah ilaa 9 galabnimo Talaadada.
Splash City waxay ku taalaa 20 daqiiqo oo laga soo bilaabo bartamaha St. Louis ee Eastport Plaza oo ku yaal 10 Gateway Drive ee Collinsville, Illinois. Taasi waxay u dhowdahay isgoyska I-55/70 iyo I-255.
Aqbalida guud ee Splash City waa $ 15 dadka waaweyn, $ 12 carruurta (da'da 3-16), iyo $ 10 oo waayeel ah. Carruurta iyo dhallinyaradu waa bilaash. Deganayaasha ku nool Degmada Collinsville Recreation District iyo xubnaha milatari ee haysta aqoonsi hadda waxay helayaan $ 4 sicir-dhimis ah marka la aqbalo. Iyo, qof waliba wuxuu qaadanayaa $ 5 oo ah maalintiiba 4 galabnimo
Waxaad noqon kartaa mid firfircoon ama caajis ah sida aad jeceshahay inta lagu jiro booqashadaada Splash City.
Si aad u hesho boogaha dhiiggaaga, iskuday inaad cabirto darbiga cusub ee AquaClimb ama sahaminta minaarada biyaha ee Monsoon Mountain. Monsoon Mountain waxay leedahay shan farood, oo lagu daray baaldiyada, tuubooyinka, buufinta iyo waxyaabo kale oo badan oo loogu talagalay madadaalada qoysaska leh. Carruurta waaweyn iyo dadka waaweyn waxay sidoo kale isku dayi karaan shinbiraha ama iskudubarista jirka ee mawjada FlowRider.
FlowRider ayaa bamgareysata 36,000 gallon oo biyo ah daqiiqad kasta oo abuuraya hirarka joogtada ah ee loogu talagalay dadka martida ah ee jecel wax yar.
Carruurta yaryar waxay ku raaxaystaan ​​wakhti ay ku qaataan aag la yiraahdo Sand Castle Cove. Waa meesha ugu fiican ee carruurta yaryar iyo carruurta yaryar inay ciyaaraan iyaga oo aan walwal ku haynin carruurta waawayn ee helaya habka. Carruurta yaryar waxay sidoo kale ku raaxeysan karaan meeriska gaaban ee ku yaala Dabaasha Beerta.
Waxaa jira dhowr dhacdo oo gaar ah qoysaska. Splash City waxay bixisaa Wakhtiga Wakhtiga Jimcaha laga bilaabo Jimcaha laga bilaabo 9 subaxnimo ilaa 10:15 am Waalidiinta iyo carruurta (da'da toddoba iyo wax ka yar) waxay ku heli karaan beerta qiimaha kala badh inta lagu jiro wakhtigaas. Iyo, Talaadada habeenimadu waa Habeenka Qoyska oo leh qiimo dhimis ku saabsan gelitaanka iyo cuntada.
Maskaxda ku hay, wax cunto ama dibedda ah laguma ogola beerta biyaha. Sidoo kale, qof waliba waa inuu xirtaa dharka. Lama oggola in la gooyo dharka ama dharka waddooyinka. Wixii dheeraad ah oo ku saabsan sharciyada iyo xeerarka, ka eeg bogga Splash City.
Guryaha Gowrka ee Cleveland iyo Bandhigyada Naadiga Galmada
Ebertfest wuxuu sii wadaa hanti dhawrka Roger
Sida Loo Helo Liisanka Darawalka Illinois
Jidka Nalalka ee Belleville, Illinois
Illinois 'Xadiiqadaha Gobolka ee ugu Fiican
Xadiiqadaha Biyaha ee Illinois
Jumbo Boqortooyada Boqortooyada Ingiriiska
Sida Loo Helo Bartamaha London Madaarka Magaalada London
Dhacdooyinka Halloween iyo Soojiidashada ee Indianapolis
Uglich, Ruush - Magaalo Waddan ah oo ku taal Wabiga Wabiga
9 Horyaalka Cusco ee ugu Fiican ee 2018
Magaalooyinka Muusigga Iyo Magaalooyinka Dunida Ugu
Cinemas in Lima, Peru
Wade Oval Arbaca Arbaco
Booqo Matxafka Carruurta New York City ee bilaash ah
Macluumaad booqdaha Saint Mark's Basilica
Seattle iyo Tacoma Pro Kooxaha Isboortiga
5 Waxyaabaha Great Hikes ee Kariibiya
8 Diyaar Garoonka Dallas ee Best Best of 2018
© 2021 so.traasgpu.com